ပိုကဘာလဲ, သငျသညျဤအရာအလုံးစုံကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ရထားခရီးစဉ် သင်တို့အဘို့အရှာနေလျှင် ခရီးသွားများ၏စျေးနှုန်းသက်သာနည်းလမ်းများ. Let us haveacloser look at the best museums in Europe and where to find them:
အဆိုပါ Stream သို့မဟုတ်စရဖတို့ကအဆိုပါပြတိုက် Antwerp အတွက်အကြီးမားဆုံးပြတိုက်ဖြစ်ပါသည်. If you are looking foraမြင်ကွင်းကျယ် ကြည့်ရှုခြင်း, there is free access to the ခေါင်မိုးပေါ် ပြတိုက်၏. စရဖ၏ရှုပ်ထွေးသောလည်းရှိပါတယ် စားသောက်ဆိုင် အောက်ကတစ်ဦးကဖီး. သင်၌ရှိကြလျှင်ပြတိုက်သူ့ဟာသူချစ်စရာကောင်းတဲ့နှင့်တစ်ဦးအလည်အပတ်ရကျိုးနပ်သည် Antwerp.
ထဲမှာနောက်ထပ်ပြတိုက် နယ်သာလန်, အဆိုပါ သမ္မာကျမ်းစာပြတိုက် တည်ရှိပါသည် အမ်စတာဒမ်. It is one of the best museums in Europe if you want to learn more about the Bible. Bijbels သွားရောက်လည်ပတ်ဒတျချြလူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်ကမျြးစာ၏အရေးပါမှုနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနားလည်ကူညီပေးသည်. It is undoubtedlyaunique museum, ချစ်သောသူများအတွက်ကောင်းစွာ-ကိုက်ညီ ဘာသာရေး သမိုင်း.
MACHmit Children Museum, ဘာလင်, ဂျာမနီ
ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွားများအတွက်, it does not get any better than the MACHmit Children ပြတိုက် ဂျာမနီ. သငျသညျဘာလင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလျှင်, MACHmit ထွက်စစ်ဆေးသေချာအောင်နှင့်၎င်း၏ variety of attractions. They are suitable for adults as well, ထိုကဲ့သို့သောအနုပညာဓာတ်ခွဲခန်းအဖြစ်အများအပြားစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူ, ပုံနှိပ်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ, နှင့်တောင်တက် labyrinth.
ဥရောပအကောင်းဆုံးပြတိုက်သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါသည်. If you are ready to go, သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေစာအုပ်ဆိုင် ယခုနှင့်စီးနင်းပျော်မွေ့!
#ပြတိုက်	#ခရီးသွား	europetravel	ယူရိုခရီး	ပြတိုက်	ခရီးသွား	ခရီးသွားသြစတြီးယား	ခရီးသွား	ခရီးသွားများ	netရာဝတီ	ခရီးသွားအကြံပြုချက်များ
ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား